admin>, Author at SAMACHAR SANJAL
March 22, 2018 admin>
ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु पूर्वपशिचम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको लहान नगरपालिका–१ स्थित सडकमा बिग्रेर रोकिराखेको ना.३ख ५१४५ नंको ट्रकमा स.३प ४८५० नंको मोटरसाइकल आज बिहान ठोक्ँिकदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । मृतक चालक लहान नगरपालिका–१७ गोविन्दपुर निवासी ३६ वर्षीय मो.सादिर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका मो. सादिरकोे लहानस्थित रामप्रसाद उमा स्मारक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानले जनाएको छ । https://www.ebrightnepal .com/2018/03/22/%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%95%E0%A4%B2-%E0%A4%A0%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BF-2/
एजेन्सी । भगवान शनि अर्थात् कर्म फल दाताको नाम सुन्ने बित्तिकै मानवको हातखुट्टा मुटु काप्ने गर्दछ । शनिको दशा र बक्र दृस्टी जसमा पर्छ उनीहरुले शारीरिक समस्या, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, र रोग आदि लगायतको समस्याहरु झेल्नु पर्छ भन्ने हाम्रो धार्मिक विश्वास रहेको छ । ज्योतिषको अनुसार शनि ग्रहको साढे सातको दशा ७ वर्षसम्म चल्ने गर्दछ । तर साढे सातको प्रभाव सधै अशुभ मात्रै हुदैन । शनिको शुभ प्रभावले व्यक्तिलाई सफलता र उन्नति पनि मिल्ने गर्दछ । २०१८ मा शनिको यी राशिहरुमा साढे सात र बक्र दृस्टी रहनेछ । जब…
कञ्चनपुर / घरबाट हराएको बाइस दिनपछि कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका– ८ पिलरिफाँटाका ४५ वर्षीय दनबहादुर बुढा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । गाउँ नजिकैको बर्रेगडामा उनी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन । स्थानीय बासिन्दाले बुढा झुिण्डएको अवस्थामा देखेपछि बुधबार साँझ प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक मोहन साउदले बुढाको शव झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको बताउनुभयो । शव कुहिएको तलको भिडियो हेर्नुहोस अवस्थामा फेला परेको छ उहाँले भन्नुभयो । शव नजिकै एक हँसियासमेत फेला परेको छ । शव परीक्षणका लागि महाकाली अञ्चलअस्पताल पठाइएको छ । http://sapanakobazar .com/index.php/2018/03/22/asfads/
काठमाडौं, ८ चैत्र । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नको लागि आफूले तत्काल न्यायपरिषद ऐन संशोधन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री तामाङ्ले भने,‘यसको लागि नयाँ कानून ल्याउन आवश्यक छैन, न्याय परिषद ऐनकै एउटा दफा संशोधन गरे पुग्छ, अहिलेसम्म न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थिएन्, अब सम्पत्ति अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्ने कानूनको व्यवस्था गर्छु, सम्पत्ति विवरण बुझाएरमात्रै हुँदैन, सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ ।’ उनले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानून बनाउँदा आउने जस्तोसुकै…
काठमाडौं। श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीमाथि कडाइ गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागभित्र रहेका अटेरी कर्मचारी मन्त्री बिष्टको निशानामा परेका हुन् । विभागबाट अन्यत्र सरुवा गरिएका कर्मचारी तोकिएको कार्यक्षेत्रमा जान नमानेर विभागमै हाजिरी गर्दै आएका थिए । बिष्टले ती कर्मचारीको हाजिरी रोकिदिएका हुन् । यहाँबाट सरुवा भइसकेका कर्मचारी पनि काजमा विभागमै आएर हाजिरी गरिरहेका थिए । मन्त्री विष्टले अब दरबन्दीमा रहेका बाहेकका कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागमा हाजिर नगराउन निर्देशन दिएका हुन् । अब दरबन्दीका बाहेक अन्य काजमा आएका कर्मचारीले यहाँ हाजिर गर्न पाउनेछैनन् । यहाँ दरबन्दीभन्दा १६ जना…
काठमाडौं– ‘रक्षक नै भक्षक’ भएपछि कसको के लाग्छ ? समाजमा शान्ति–शुरक्षा र अमन–चयन गराउने कसम खाएर राज्यको बर्दीमा सजिएका प्रहरीका एक एसपी नै चोरीको गाडीमा हिँड्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाले २०७३ पुस पहिलो साता तीनओटा गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो । भारतबाट चोरेर नेपालमा नक्कली ब्लूबुक र नक्कली नम्बर प्लेट बनाएर प्रयोगमा ल्याइएको गाडीहरु फरक–फरक ब्यक्तिहरुबाट बरामद गरिएका थिए । त्यतिवेला बरामद भएका गाडीहरुमध्ये चरिकोटका सुरेश थापाबाट नियन्त्रणमा लिइएको हुण्डाईको ‘आई–१० बा ८ च ९९३२’ नम्बरको गाडी अहिले अपराध महाशाखाकै प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्र उप्रेतीले चढिरहेका…
काठमाण्डौं, २०७४ चैत ८ -भारतले महाकाली नदीको पानी यमुना नदीमा लैजाने योजनाबारे नेपाल सरकारसँग छलफल अघि बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण चर्चा भैरहेको समयमा भारतीय पक्षले विवादास्पद ‘रिभर लिंकिङ परियोजना’मा नेपाललाई सहभागी गराउन खोजेको हो । त्यसैअनुसार महाकाली नदीको पानी लैजाने विषयमा छलफल अघि बढाउने तयारी उसले गरेको छ । भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्स अनुसार भारतको जलस्रोत मन्त्रालयले महाकालीको पानी यमुना नदीमा लैजाने विषयमा नेपालसँग छलफल चलाउन विदेश मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।‘यो प्रस्ताव सचिवालय कमिटीले स्वीकृत प्रदान गरेको छ र नेपालसँग प्रारम्भिक संवाद शुरु…
काठमार्डौं : कर्णाली प्रदेशका गैरसरकारी संस्था(एनजीओ) लाई नियमवन गरिने भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा एनजीओलाई ‘आउट’ गर्ने घोषणा गरेका छन्। कर्णालीबासीलाई एनजीओले परनिर्भर बनाएको भन्दै उनले ‘आउट’ गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले जनवादी शैलीमा नै एनजीओको गतिवधिलाई नियन्त्रण गर्ने बताए। एनजीओ नजाँदा कर्णालीको उत्पादनले उनीहरुलाई पुग्ने गरेको गरेको बताउँदै काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘एनजीओ नभएसम्म कर्णालीमा गरिबी थिएन, कसैले चाउचाउ खादैनथिए, कर्णाली कै उत्पादन खान पुग्थ्यो’। एनजीओ परनिर्भर बनाएको आरोप लगाउँदै उनले भने ‘एनजीओले चुलोदेखि ट्वाइलेट सम्म बनाइदिए ।’ उनले घरमा काम गर्ने मान्छेसम्म…
काठमाडौं, ८ चैत-आकर्षक तलबसहित कुवेत पठाउने भन्दै नेपाली युवासंग २० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने एक ठग म्यानपावर व्यवसायीलाई युवाहरूले वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयभित्रै थुनेका छन् । करीब डेढ सयको संख्यामा रहेका युवाहरूले विभागको कार्यालय बुद्धनगर परिसरमै बजाज ओभरसिजको सञ्चालक बताउने राम सिंहलाई बिहीबार थुनेका हुन् । कुवेतको ग्लोबल एक्सन कम्पनीमा २ सय केडी (करीब ५५ हजार नेपाली रुपैयाँ) तलबसहित काममा पठाउनेभन्दै उनले ३ सय नेपाली युवाबाट पैसा असुलेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभाग, राहत तथा उद्धार शाखाका निर्देशक शशिकुमार लम्सालले ठगीमा परेकाको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताए । विभागका…
March 21, 2018 admin>
७ चैत, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि नियमित बजेट आगामी चैत १५ गते ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, बजेट ल्याउने प्रक्रियाका ढिलाइ हुँदा तोकिएकै समयमा बजेट नआउने भएको छ । प्रदेश सरकारले गएको २० फागुनमा मन्त्री परिषद्को बैठक बसी बजेट ल्याउने निर्याण गरेको थियो । तर, ऐन कानू्न निमार्ण लगायतका अल्झनका कारण सरकारको तोकेको समयमा बजेट ल्याउन सरकारले असफल देखिएको हो । आर्थिक मार्मिला एव योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सरकारले तोकेको समय सीमाभित्र बजेट ल्याउने सम्भावना नहरेको बताए । उनले बजेटका लागि आवस्यक तयारीमा…